Iindaba -I-Samsung Tab entsha ye-S7 FE kunye ne-Tab A7 lite iyeza.
Ukusuka kwiindaba ezixeliweyo, i-Samsung galaxy tab entsha ye-S7 FE kunye ne-Galaxy tab ye-A7 Lite iza ngoJuni 2021.
I-Galaxy Tab ye-S7 FE imalunga nokunikezela abathengi ngeempawu abazithandayo ngexabiso elifikelelekayo.
Yakhelwe nge-intshi enkulu eyi-12.4-intshi ukubonisa, ukugqibelela ukuthatha ulonwabo, ukuvelisa, ukwenza imisebenzi emininzi, kunye nobuchule kwinqanaba elilandelayo.
I-S Pen ibandakanyiwe-ebhokisini, ukuze ukwazi ukwenza uninzi lwalo mboniso mkhulu namandla kwimisebenzi yakho ngokusebenza ngakumbi nangakumbi.
Ngamanqaku eSamsung, unokuguqula ngokulula amanqaku akho abhalwe kwiscreen ukuba abe ngumbhalo. Gcina amanqaku akho ehlelwe ngeethegi ezizenzekelayo, kwaye usebenzise uPhando oluKrelekrele ukufumana inqaku elichanekileyo olifunayo kwangoko-akunamsebenzi nokuba uchwetheziwe okanye ubhalwe ngesandla.
Kwaye ukukhulisa imveliso yabo, i-Galaxy Tab ye-S7 FE igubungele i-Samsung DeX kunye nesimbozo sekhibhodi, ungasebenzisa ithebhulethi yakho njengelaptop. Inamava ngakumbi njengokusebenza kwePC. Ukuba iphepha lophando okanye iprojekthi yomsebenzi uvule iithebhu ezininzi okanye usetyenziso ngaxeshanye, akukho sidingo sokukhathazeka: I-Galaxy Tab ye-S7 FE ilawula ukwenza imisebenzi emininzi ngokulula.
I-Galaxy Tab ye-S7 FE iza ngemibala emine emihle: iMystic emnyama, iMystic Silver, iMystic Green, kunye neMystic Pink.
Nokuba unomboniso omkhulu, uqhayisa ngenkangeleko encinci kunye nokukhanya.
Ngebhetri enamandla kunye nokutshaja okukhawulezayo okungama-45w, ungasasaza ngokulula, usebenze, kwaye wenze ngaphandle koxinzelelo lokufumana indawo ekufuphi.
I-Galaxy Tab ye-A7 Lite ngumlingane ohamba naye ngexabiso elifikelelekayo. Ngesikrini esingu-8.7-intshi esibekwe kwisigqubuthelo esityebileyo, esomeleleyo sentsimbi, siyaphatheka ngokukhawuleza. I-bezels ezimdaka ezijikeleze umboniso kunye nezithethi ezinamandla ezimbini ngeDolby Atmos zikusondeza kumabali ngelixa ubukele imovie oyithandayo, imiboniso kunye nokudlala imidlalo.
I-Galaxy tab ye-A7 Lite ixhasa ukutshaja okukhawulezayo kwe-15W, kunye nebhetri ehlala ixesha elide kunye nokukwazi ukukhetha i-LTE. Kulungile ukubukela lo mboniso mtsha uqhubekayo okanye umdlalo ekuhambeni.
Imibala emibini iyafumaneka, isilivere nengwevu.
Yeyiphi ithebhu iqabane lakho elifanelekileyo?